Jackson Suber: Fandresena mahafinaritra tao amin'ny White Sands Bahamas NCAA Invitational
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Jackson Suber: Fandresena mahafinaritra tao amin'ny White Sands Bahamas NCAA Invitational
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Sports • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Jackson Suber avy amin'ny Ole Miss dia nandresy tamin'ny fifaninanana lehilahy White Sands Bahamas NCAA Invitational isan-taona tamin'ny alahady tao amin'ny Ocean Club Golf Course tao amin'ny Atlantis Resort ary Ole Miss no nanjaka tamin'ny fifaninanana ekipa, nandresy tamin'ny kapoka 11 ny fanjakan'i Tennessee Atsinanana.
Ny fanjakan'i Tennessee Atsinanana dia nahavita ny laharana faharoa tamin'ny fifaninanana 12 ekipa malaza.
Suber, zokiolona avy any Tampa, Florida, no nanangona ny anaram-boninahitra fahatelo nataony.
Tena mahafinaritra ny tonga eto Bahamas. Ary ny fandresena ao amin'ny paradisa dia mahatonga azy ho miavaka kokoa. Na oviana na oviana ianao no mandresy dia mahafinaritra izany. Fa ny fandresena eto dia mahafinaritra, hoy i Suber.
Suber, zokiolona iray avy any Tampa, Florida, dia nanao karatra 2-under 70 tamin'ny fihodinana farany tamin'ny lalao Ocean Club 7,159 metatra mba hamaranana tamin'ny totalin'ny 11-under 205 tamin'ny fihodinana telo noho ny an'i Tony Briggs avy any San Francisco. Briggs dia nanana sterling 7-eo ambanin'ny 65, fihodinana ambany tamin'ny herinandro, raha i Albin Bergstrom avy any South Florida kosa dia tafakatra indray tamin'ny toerana fahatelo taorian'ny famaranana 68.
Ping All-American Honorable Mention tamin'ny taom-pilalaovana farany ho an'ny Rebels tamin'ny vanim-potoana farany, nanangona ny anaram-boninahiny fahatelo i Suber.
“Herinandro mahafinaritra ho an'ny ekipanay izany. Nilalao mafy izahay, ”hoy i Suber, 22 taona. “Tao amin'ny andro voalohany, nanery mafy izahay ny roa andro nanaraka, ary nanatsara ny drafitry ny lalao. Nahitam-bokany izany – ary nanomboka nisaraka tamin’ireo ekipa hafa izahay. Tena mahafinaritra ny tonga eto Bahamas. Ary ny fandresena ao amin'ny paradisa dia mahatonga azy ho miavaka kokoa. Na oviana na oviana ianao no mandresy dia mahafinaritra izany. Fa ny fandresena eto dia mahafinaritra. ”
“Niasa mafy i Jackson. Fantatro fa milaza izany izahay momba ny mpilalao tsirairay, saingy efa an-taonany maro izany. Efa akaiky izy, saingy mbola tsy tapaka hatramin’izao”, hoy ny mpanazatra ny Rebels Chris Malloy. “Na oviana na oviana ianao handresy fifaninanana tahaka izao, amin'ny toerana tahaka izao, mba handresy any amin'ny paradisa, dia tena miavaka kokoa. Ity no voalohany amin'ny fandresena maro ho an'i Jackson. ”
Ho fanampin'ny Suber, Ole Miss, izay nitarika taorian'ny fihodinana faharoa, dia nahazo ny laharana faha-10 voalohany avy amin'i Brett Schnell (T-7; 212), ary Evan Brown (T-10; 213). Jack Gnam (T-29; 217) dia namarana ny isa ho an'ny mpikomy rehefa nahavita tamin'ny 26-lamban'ny 838.
“Tao amin'ny taranja dia nanana herinandro mahafinaritra izahay. Eo ivelan'ny lalao dia sarotra ny mandresy an'i Atlantis sy ny Ocean Club Golf Course," hoy i Malloy. “Mandehana any amin'ny toerana mahafinaritra be dia be izahay, saingy tsy azoko antoka hoe firy raha oharina amin'izany. Nahagaga ny niaina an'i Bahamas, tsy nisy toy izany ny fahitana sy ny feo.”
Notarihin'i Briggs sy Soren Lind, izay nahavita T-7 tamin'ny totalin'ny 4-under 212, ny East Tennessee State dia nahazo isa 849 mba hamaranana ny faharoa raha i San Francisco kosa nifamatotra tamin'ny fahatelo tamin'ny 851 niaraka tamin'ny mpampiantrano Arkansas tao Little Rock, izay nitarika taorian'ny fihodinana voalohany. South Florida dia fahadimy tamin'ny fitambarany 852.
Ny herinandro mialoha, nandritra ny ekipa fito Vehivavy White Sands Bahamas NCAA Invitational, Kirsten Baete avy any Nebraska dia nitifitra ny fihodinana farany tamin'ny par 72 ary namoaka 10 ambanin'ny 206 noho ny fandresen'ny tariby tamin'ny alàlan'ny kapoka iray nanoloana an'i Emily Hawkins an'i Campbell. Ao amin'ny filaharan'ny ekipa, Campbell, miaraka amin'ny mpilalao telo nahavita teo amin'ny top-10, nandresy ny Cornhuskers tamin'ny kapoka efatra, ary ny mpampiantrano University of Miami dia nahazo ny fahatelo.
Ny White Sands Bahamas NCAA Invitational malaza, manasongadina ny sasany amin'ireo ekipa mpilalao golf ambony indrindra any Etazonia, dia namarana ny taona faharoa tamin'ny fifaninanana matanjaka roa herinandro nahomby, ary tao anatin'ny fotoana fohy dia lasa iray amin'ireo fivoriana golf ambony indrindra teo amin'ireo mpikambana NCAA. sekoly.
“Herinandro tsy mampino izany, ary voninahitra lehibe ny nampiantranoana eto Bahamas,” Jake Harrington, mpanazatra golf an'ny ekipa lehilahy ao Arkansas ao Little Rock. "Ity dia hetsika kilasy voalohany, ary tsy isalasalana fa ho iray amin'ireo hetsika voalohany amin'ny golf amin'ny oniversite."
Nampiany i Suber: “Nandeha tsara ny fifaninanana manontolo; hetsika manara-penitra eran-tany izany. Tena tsy mampino ny namarana ny vanim-potoana fararano teto, indrindra amin'ny toetr'andro, ny tora-pasika ary ny zavatra rehetra atolotr'i Atlantis. Tsy isalasalana fa hanoro izany traikefa izany avy hatrany amin'ireo mpiara-miasa amiko sy ireo sekoly hafa aho. ”
Herinandro ao amin'ny kianjan'ny golf any Bahamas, herinandro any amin'ny paradisa, ”hoy ny praiminisitra lefitra I. Chester Cooper, Minisitry ny Fizahantany, Fampiasam-bola & Aviation Bahamas. "Tena nahafinaritra ny nampiantrano ny sasany amin'ireo mpilalao golf ambony ao amin'ny Ocean Club Golf Course, ary manantena fa ireo mpilalao mifaninana rehetra dia nankafy ny fotoanany teto Bahamas. Manasa ny mpankafy golf rehetra izahay, na vao haingana na matihanina mba ho tonga hiara-milalao golf aminay.
Miaraka amin'ny nosy sy cays maherin'ny 700 ary toerana nosy tsy manam-paharoa 16, The Bahamas dia 50 kilaometatra miala ny morontsirak'i Florida, manolotra fandosirana mora amin'ny sidina izay mitondra ny mpandeha hiala amin'ny andavanandrony. Ny Nosy Bahamas dia manana jono, antsitrika, sambo, ary an'arivony kilaometatra amin'ny rano sy tora-pasika mahafinaritra indrindra eto an-tany miandry fianakaviana, mpivady ary mpitsangatsangana. Tsidiho ny nosy rehetra atolotra ao bahamas.com na ao amin'ny Facebook, YouTube or Instagram hahitanao hoe maninona no Tsara kokoa any The Bahamas.
MOMBA NY COURSE GOLF OCEAN CLUB
Atlantis Paradise Island's Ocean Club Golf Course dia manolotra làlana sarotra sy mahafinaritra ho an'ireo mpilalao golf maniry filalaovana tompon-daka. Nitoe-jaza tamim-pahakingana, ny hazakazaka amina hazakazaka 18 nosoratan'i Tom Weiskopf, par 72 dia mirefy 7,100 XNUMX metatra eo amin'ny saikinosy Atlantis. Ny fampianarana dia nampiantrano hetsika ara-panatanjahantena malaza toy ny Michael Jordan Celebrity Invitational (MJCI), ny Michael Douglas & Friends Celebrity Golf Tournament, ary ny Pure Silk-Bahamas LPGA Classic.
Ho an'ny fanasana White Sands Bahamas NCAA